Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop - final | Abuurista khadka tooska ah
Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Final)
Antonio L. Carter | | Photoshop, Tababarada
Maanta waxaan kuu keenayaa qaybtii ugu dambeysay ee tan Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop, Meeshii aan ka tegayay waxaad ku soo saartay nidaam aad kula shaqeysid mashiinka farsamada ee ay bixiso Suite-ka Adobe, taas oo aad ku baran doontid aasaasida a socodka shaqada labisan oo xasilloon ka dhex jira barnaamijyada curiya, isagoo ah Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop kuwaan tan ku isticmaalay tutorial.
Waxaan u adeegsaday iskudhafyada barnaamijyada si aan uhormariyo habsami u socodka shaqada labada u dhaxeysa taas oo noo ogolaaneysa inaan wax ka bedelno dhowr sawir halbeeg kasta, kuna dabakhno dhammaan daaweynta isku mid ah, kobcinta waxqabadkeena Photoshop loogu talagalay Qeybtii hore, waxaan aragnay sida aan wax uga beddeli karno koox sawir ah adoo adeegsanaya amarka Otomaatiga-Dufcaddii, adoo adeegsanaya laba fayl, mid ka mid ah Asalka iyo mid kale Goob. Maanta labada barnaamij waa isku xidhan yihiin. Ha moogaan
Haddii aad horey u soo saartay qaybtii hore ee tan tutorial (Casharro: Shaqo la socota Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop Qaybta 5), waxaad xusuusnaan doontaa markii aan ku sharaxay xulashooyinka ku jira sanduuqa wadahadalka aaladda Otomaatiga-Dufcaddii taas oo horteenna ka dhacday, qaybta Asalka waxay na siisay suurtagalnimada inaan sawirada kala soo baxno qalabka si toos ah Bridge, taas oo sida aad u maleynaysid, ka dhigaysa hawsha otomatikada shaqada xitaa sahlan. Hagaag aan ku gaadhno qaybtan ugu dambeysa ee daran tutorial.
1 Furitaanka Buundada
2 Ku xirida Photoshop
3 Dejinta amarka
4 Hab kale oo loo qaabeeyo
5 Dhameynta casharka
5.1 Faylasha la soo dejin karo
Mar Adobe Bridge furan yahay, waxaan galnaa galka Lenny oo waxaan raadineynay kuwa aanan isticmaalin bilowgii, kuwa aan kuqiyaasnay ​​1 iyo 3 xiddigood. Marka aan helno meesha ay ku yaalliin, waanu doorannaa iyaga oo dhammaantood ku wada ridaya isla galka. Faylkaas ayaan ku caddeyn doonnaa Photoshop.
Ku xirida Photoshop
Marka aan helno dhamaan sawirada aan dooneyno in aan wax ka qabano Waxqabadka 1 ee Kooxda Ficilada ee aan ugu magac darnay Abuurista khadka tooska ah, waxaan ku soo bandhigeynaa fayl oo waan ku magacawnaa. Waan magacaabay Lenny quruxsan. Mar alla markii aan magacawnay galkaas waxaan soo bandhigeynaa dhammaan sawirada si loogu daaweeyo gudaha. Marka tan la sameeyo oo leh Photoshop fur, gudaha ayaan u jiheysan doonnaa Adobe Bridge wadada Qalab-Photoshop-Lot. Marka Bridge nagu xidho Photoshop, ama in ka badan si gaar ah, toos ah qalabka Otomaatiga-Dufcaddii, Furitaanka sanduuqa wada hadalka ee tan.
Horeba sanduuqa wada hadalka ee qalabka Photoshop Otomaatiga-Dufcaddii, waxaan kala doorannaa xulashooyinka kala duwan ee jira, maaddaama aan yeelan karno sidii Asalka ee sawirada Bridge, automate waxkasta si aad toos ugu kaydiso, ikhtiyaar ahaan Badbaadi y ku dhow, ama u dhoofin fayl kale Goob. Waxaan go'aansaday inaan u diro galka Goob in aan u karti u siiyay desktop-kayga, inkasta oo aan u diri karno meel kasta, xitaa galka shabakadda, tusaale ahaan. Xusuusnow in tan si buuxda ugu shaqeyso, amarka Kaydi sida in aan ku soo bandhignay ficilka, waxay leedahay waddo qorsheysan oo ay ku daadineyso sawirada, taas oo ay tahay inay la jaanqaado wadada galka aan dooneyno oo ah halka loogu talagalay daabacaaddan kooxeed.
Hab kale oo loo qaabeeyo
Sidii aan horay u soo sheegnayba, waxaan aaladda u shaqeyn karnaa Otomaatiga-Dufcaddii si toos ah loogu keydiyo isla galka aan ka daawaneyno Adobe Bridge, samaynta ah socodka shaqada muuqaal badan iyo dhadhankeyga oo ka raaxo badan, tan iyo markii aan ku aragno indhahayaga hortooda muuqaalka sawirka Bridge sida Photoshop Sawirada galka kujira ee aan horey kuugu sheegnay mid mid ula dhaqmaan iyo sida ay isku badalaan indhahayaga hortooda. Si si sax ah loogu fuliyo qaabeynta, waa inaan ka tagnaa ikhtiyaarka la hubiyey Iskadhig Keydinta Sida amarrada tallaabo.
Gabagabadii, waxaan jeclaan lahaa in aan tilmaamo in ay aad muhiim u tahay in la barto maareynta barnaamijyada iyo qaababka ay u wada shaqeeyaan midba midka kale si loo sameeyo loona hirgeliyo qulqulka shaqada fududeeya duugga iyo jeexjeexa weyn ee hal abuure ama horumariyaha ay tahay inuu la shaqeeyo macluumaad aad u badan. Tani maanta waa wax ay isla shirkadaha horumarinta softiweerku yaqaannaan oo ay ku dadaalayaan inay abuuraan nidaamyo cusub oo ah shaqo kaas oo aan wax badan ku shaqeyn karno, innagoo ka faa'iideysaneyna waqtigeenna.
Faylasha la soo dejin karo
Waxaan kuu daayay galka la soo dagsan karo oo qeyb ka mid ah sawirada Lenny, la daweeyey oo aan la daaweyn, marka laga reebo Kooxda Wadaag halkee ka heli doontaa Tallaabada 1, in ka badan in la fuliyo, waxaan kuugu soo lifaaqayaa si aad u xajisid, u kala furfuro oo dib ugu soo lifaaq sidaad u jeceshahay, maadaama taasi ay tahay waxa ay ficiladu ku saabsan yihiin, si aad u awoodo inaad la jaanqaado barnaamijka dhadhankeena iyo baahiyaheena.
Midka xiga ayaan kugu sugayaa tutorial, taas oo aan ku bari doono inaad midab yeelato adoo isticmaalaya kanaallada ku jira Photoshop. Dhamaantiin waad salaaman tihiin.
Macluumaad dheeraad ah - Casharro: Shaqo la socota Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop Qaybta 5
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Final)
In ka badan 4 asal oo bilaash ah oo naqshadahaaga ah
PicMonkey waa tifaftiraha sawirka tooska ah ee khadka tooska ah